Imimmisele yenkonzo - Word.to
I-PDF kwi Word
Imigaqo yeNkonzo yeLizwi
Ngokungena kwiwebhusayithi ku- https: //word.to , uyavuma ukuba ubotshelelwe yile migaqo yenkonzo, yonke imithetho nemigaqo esebenzayo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela nayiphi na imithetho yendawo esebenzayo. Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na le miqathango, awuvumelekanga ukuba usebenzise okanye ufike kule ndawo. Izinto eziqulathwe kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nophawu lwentengiso.
Imvume inikiwe ukukhuphela okwethutyana ikopi yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiWebhusayithi yeWord.to yokujonga okungahambelani nokuthengisa kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukuhanjiswa kwetayitile, kwaye phantsi kwelayisensi awunako:
ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi yeLizwi.to;
dlulisa izixhobo ngomnye umntu okanye 'isipili' izinto nakweyiphi na enye iseva.
Eli phepha-mvume liyakunqunyanyiswa ngokuzenzekelayo ukuba wophula nayiphi na kwezi zithintelo kwaye unokuyekiswa nguLizwi. Emva kokuphelisa ukujonga kwakho ezi zinto okanye xa kupheliswa iphepha-mvume, kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo onazo nokuba zikwifomathi yombane okanye eprintiweyo.
Izinto ezikwiwebhusayithi yeLizwi.to zibonelelwa ngesiseko 'njengoko sinjalo'. ILizwi.to alwenzi ziqinisekiso, zichaziweyo okanye zichaziweyo, kwaye ngokwenjenje ayizichazi kwaye iyazishiya zonke ezinye iziqinisekiso kubandakanya, ngaphandle komda, iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukungaphuli umthetho wepropathi enomnye okanye okunye ukunyhashwa kwamalungelo.
Ngaphaya koko, uLizwi.to akagunyazisi okanye enze naziphi na izimvo malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembakala kokusetyenziswa kwemathiriyeli kwiwebhusayithi yayo okanye ngokunxulumene nezinto ezinjalo okanye nakweyiphi na iisayithi ezinxulumene nale ndawo.
Akukho meko apho uLizwi.to okanye abathengisi bayo baya kuba noxanduva lomonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, umonakalo wokulahleka kwedatha okanye wenzuzo, okanye ngenxa yokuphazamiseka kweshishini) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo ezikwiLizwi. iwebhusayithi, nokuba uLizwi.to okanye uLizwi. ummeli oqeqeshelwe ulwazi wazisiwe ngomlomo okanye ngembalelwano malunga nokwenzeka kolo monakalo. Ngenxa yokuba eminye imithetho ayikuvumeli ukusikelwa umda kwiziqinisekiso ezichaziweyo, okanye umda woxanduva ngenxa yomonakalo owenzekayo okanye owenzekayo, olu thintelo lusenokungasebenzi kuwe.
Izinto ezibonakalayo kwiwebhusayithi yeLizwi.to zinokubandakanya iimpazamo zobuchwephesha, zokuchwetheza, okanye zokufota. ILizwi.to aligunyazisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yazo zichanekile, ziphelele okanye zangoku. ILizwi.to linokwenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo uLizwi.to akenzi ukuzibophelela ekuhlaziyeni izixhobo.
I-Word.to ayikhange ihlole zonke iisayithi ezinxulunyaniswe kwiwebhusayithi yayo kwaye ayinaxanduva lomxholo wayo nayiphi na indawo enxibelelene nayo. Ukubandakanywa kwayo nayiphi na ikhonkco akuthethi ukuvumela uLizwi.to kule ndawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi edityanisiweyo kusemngciphekweni womsebenzisi.
ILizwi.to inokuphinda lihlaziye le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuba ubotshelelwe luhlobo lwangoku lwemiqathango yenkonzo.
Le migaqo neemeko zilawulwa kwaye zithathwa ngokungqinelana nemithetho yase-Connecticut kwaye ungenisa ngokungenakuphikiswa kulawulo olukhethekileyo lweenkundla ezikuloo Rhulumente okanye kuloo ndawo.
Igama lika kwiJPG
I Word kwi-HTML
I Word kwiPowerPoint
I Word kwi-PPTX
I Word kwiXLS
Igama lika kwiXLSX
ILizwi le kwi-BMP
I Word kwiGIF
DOC ukuya kwiJPG
I-DOCX ukuya kwiJPG
DOC ukuya kwiPNG
DOCX ukuya kwiPNG
DOC ukuya kwiXLS
I-DOCX ukuya kwi-XLS
DOC ukuya kwiXLSX
I-DOCX ukuya kwi-XLSX
DOC ukuya kwi-ICO
DOC ukuya kwi-BMP
I-DOCX ukuya kwi-ICO
DOCX ukuya kwi-BMP
I Word kwiWebP
I Word kwiTIFF
I-DOCX ukuya kwi-TIFF
DOC ukuya kwi-TIFF
I Word kwiPSD
Guqula kwi Word
IJPG kwi Word
I-PNG kwi- Word
IJPEG kwi Word
DOC kwi Word
I-DOCX kwi Word
I-SVG kwi Word
I-ICO kwi Word
BMP kwiLizwi le
Igama lika kwi-DOCX
Igama lika kwi-DOC
DOCX ukuya kwi-DOC
DOC ukuya kwi-DOCX
IJPG ukuya kwi-DOC
IJPG iye kwi-DOCX
JPEG ukuya kwi-DOCX
PNG ukuya kwi-DOC
I-PNG ukuya kwi-DOCX
ICO ukuya kwi-DOC
ICO ukuya kwi-DOCX
I-BMP ukuya kwi-DOC
I-BMP ukuya kwi-DOCX
I-SVG ukuya kwi-DOCX
IWebP kwi Word
I-GIF kwi Word
I-TIFF kwi Word
TIFF ukuya kwi-DOC
I-TIFF ukuya kwi-DOCX
I-PSD kwi Word
58,113 Uguquko ukusukela ngo-2020!